N'ogbe Plastic Salad akpa Manufacturer na Supplier | Copak
Plastic salad akpa
N'agbanyeghị agbanyeghị ụlọ oriri na ọ runụ orụ ma ọ bụ cafe ma ọ bụ na ị nwere ebe a na-ewepụ ego, COPAK nwere obi ụtọ ịbịakwute gị plastic salad akpa -enyere gị aka ere salads gị na a ọzọ ọkachamara imecha. Nnukwu nhọrọ ị ga - ahọrọ maka ijiri nri oyi: Ọ dịkwa oke maka ijere ọgwụgwọ oyi, ụdị salad niile, achịcha dị iche iche na nri.
Salad akpa / disposable salad ọkwá / plastic salad nkwakọ / Plastic salad akpa,
Dị ka ọ bụla anyị na-eji salad salad, olu nke 12oz, 16oz, 24oz, 32oz bụ ndị kachasị ewu ewu zụrụ. Nkọwapụta dị ka nke edepụtara n'elu. Ihe PET bụ 100% recyclable.
E wezụga plastic Salad akpa arụpụtara, anyị nwekwara ike inyere souring salad ọkwá nke ihe ndị ọzọ dị ka akwụkwọ, PP na na. Ma akpa PET salad sitere na plastic na-adigide ya wee nye ya ndụ ọzọ site na imegharị. Enweghị mmanụ ala ma enweghị ihe na-emerụ ahụ nke nwere ike imetụta ọdịnaya.
1, Long inogide na doro anya plastic salad akpa: Nke a takeaway akpa bụ sturdy na-eguzogide ọgwụ cracks na oge izu. Ogologo njem abụghị nsogbu.
2.Ideal maka ịchekwa ihe oriri dị ka pasta, salads, meatballs, seafood, wdg. COPAK doro anya nri nri plastik nwere ike igosipụta nri gị na nnukwu visibiliti, nke a na-adọta ọtụtụ ndị ahịa maka gị.
3.COPAK plastik salad plastik dị mma maka ije ozi dị mfe ma na-abịa na mkpuchi nke na-ekpuchi nnukwu efere ahụ nke ọma. Emere ya na plastik a na-emegharị emegharị ma nwee mkpuchi mkpuchi nke na-akwalite nzipụta ngwaahịa na ahịa.
4.RATR HE AH HE ỌRAL N’ EVBỌCH - - Kwadebe salad kachasị amasị gị site na ihe ndị na-acha ọkụ n’abalị nke ụlọ gị ma nwee ọfịs ma ọ bụ na njem.
5.Ọ dịghị ọcha! - Dị nnọọ tufuo ozugbo okokụre; ọ dịghị mkpa ịsacha ma weghachite n'ụlọ mana ọ bụ Eco enyi na enyi ma enwere ike weghachite ya kpamkpam.
Nke gara aga: PET Deli ihe
Osote: PET iko iko
92mm PET iko
92mm PET Cup 、 98mm PET Cups 、 Custom PET Cups Cup PET Cups and Lids 、 PET Cups N'ogbe 、 PET Deli Cups ET PET Milkshake Cup 、 PET Portion Pages Cup with Lids ET PET Smoothies Cup 、 E Bipụtara PET Cup
98mm PET iko
Omenala PET iko
PET iko na mkpuchi
PET iko N'ogbe
PET Deli iko
PET iko iko na mkpuchi
PITA Smoothies iko
Ejiri PET Cup
Omenala E Bipụtara Plastic iko
12oz E Bipụtara PITA Plastic iko 92mm
PITA Kọntaktị Cup